Ihe Nweta N'ịntanetị | Lọ Akwụkwọ Oakleigh na Early Early Intervention Center
N'okpuru ebe a bụ ndepụta ihe ntanetị nke anyị chere nwere ike ịmasị ma ọ bụ baara gị uru. Ọ bụ ezie na anyị na-agbasi mbọ ike iji hụ na njikọ ndị a ziri ezi, ruo n'oge ma dị mkpa, Olọ Akwụkwọ Oakleigh enweghị ike ibu ọrụ maka ibe ndị na-eweta mpụga.
Nweta YouTube bụ interface nwere ike ịnweta maka ndị ọrụ nke teknụzụ na-enye aka igwu egwu vidiyo YouTube n'adabereghị. Ukwuu na-atụ aro site na Agwa agwa.
Gaa Leta YouTube
Na-achọ n'efu, egwuregwu egwuregwu na ihe omume maka ụmụ ọhụrụ, ụmụaka na ụmụaka? CBI bụ ebe obibi nke egwuregwu na egwuregwu maka ụmụaka igwu ma mụta n'otu oge
Gaa na CBeebies
Akwụkwọ ndekọ Ngwaọrụ 2017. N'ime ngwa ọrụ 2,000 maka ịmụ na ịrụ ọrụ na agụmakwụkwọ na ebe ọrụ. Jane Hart guzobere saịtị ahụ dị ka ebe nrụọrụ akụ na-akwụghị ụgwọ na iji teknụzụ ọhụụ maka mmụta na arụmọrụ. Ugbu a ọ ghọọla otu n'ime saịtị mmụta mmụta kachasị nke weebụ na Weebụ.
Njikọ bụ a magburu onwe free akụ maka eke visual na-akwado. Họrọ oke nke grid, tinye onyonyo nke gunyere akara Boardmaker, ma ọ bụ foto nke gị. Bipụta ma bee ha! Ezigbo ihe enyemaka maka ndị nne na nna chọrọ iji nkwado anya n'ụlọ kwa.
Gaa na Njikọ
The Boardlọ Whiteboard nwere otutu mmekorita nke mmekorita nke umu akwukwo nke nwere nsogbu siri ike na miri emi. Agbanyeghi na ichota ogwe ihe omuma ihe ndi ozo bara uru na desktọọpụ.
Ngalaba ohuru ohuru nke ulo oru EQUALS weputara na Septemba 2017 nwere otutu ihe omumu nke n'efu.
Gaa Lata - boardlọ Whiteboard
HelpKidzMụta bụ nchịkọta sọftụwia maka ụmụaka na ndị nwere nsogbu ịmụ ihe na-egwu n'ịntanetị. E kewara ngwanrọ ahụ na ngalaba ise: Afọ ndị mbụ, Egwuregwu na Quizzes, Akụkọ na egwu, Egwuregwu Egwuregwu & Chọpụta Ihe.
Gaa Leta HelpKidzLearn
Richard Hirstwood nke Ọzụzụ Hirstwood emeela peeji echiche iPad. Gụnyere gụnyere modulu ọzụzụ iPad nke ị nwere ike ịpị ma rụọ ọrụ n'ụzọ gị site na vidiyo na ederede. Enwere ọzụzụ maka oge awa 7 na ihe niile n'efu maka ugbu a, ọ bara uru ịlele mgbe ọ ka dị.
Gaa na Ọzụzụ Hirstwood
Weebụsaịtị nke Agwa agwa, onye bụbu onye nkụzi na onye nhazi ICT na Priory Woods School, Inclusive Technology's Consultancy na Training Manager ugbu a Independent Independent Mkpa ICT ọkachamara na onye nkụzi ọkachamara na iji ICT na nkà na ụzụ na-akwado ndị na-amụ ihe nke afọ niile nwere mkpa siri ike ma dị mgbagwoju anya.
Nleta Ian Bean Online
Lọndọnụ Lonye Weebụsaịtị bụ akụ maka ịchọta ebe a na-enweta ohere na mmemme na isi obodo. Nke a gụnyere ogige ntụrụndụ na ebe ezumike, ụlọ nri, ụlọ mposi, yana ụlọ akụ na post ọfịs. Nwere ike ịzụta iPad / Smartphone App si iTunes.
Gaa Leta London
KneeBouncers kere Punch Robinson na 2002, ya na enyi ya Kurt Dommermuth, maka umu aka ha. N'oge ahụ, egwuregwu niile maka ụmụaka na ịntanetị chọrọ ka onye ọkpụkpọ ahụ jiri òké ahụ na-achịkwa ihe ahụ. Ya mere, ha ji otu ebumnuche wepụta: ịmepụta usoro egwuregwu nke ọbụlagodi onye ezinụlọ nke ọdụdụ nwere ike igwu. Ga ahụ egwuregwu egwuregwu, ihe omume na-atọ ụtọ iji kpalie nwa gị, nwa aka ma ọ bụ nwa akwụkwọ ga-amalite usoro mmụta ahụ.
Gaa na Knee Bouncers
MERU (Medical Engineering Resource Unit) na-enye onye ọ bụla imewe na n'ichepụta ọrụ nke nkwarụ ngwaahịa na-eto eto nwere nkwarụ mgbe ọ bụla ọzọ na ngwaahịa dị izute ha mkpa. Ha nwere ike ime mgbanwe maka ngwaahịa nkwarụ dị ugbu a ma mezie akụrụngwa mebiri emebi, yana ịmebe omenala na imepụta ihe ọhụụ na nke dị mgbagwoju anya.
The NSPCC soro na O2 iji nyere gị aka igbochi ụmụaka mgbe ha na-eji ịntanetị, netwọkụ mmekọrịta, ngwa, egwuregwu na ihe karịrị. Ma ịchọrọ ịtọlite ​​njikwa ndị nne na nna, gbanwee ntọala nzuzo ma ọ bụ nweta ndụmọdụ na netwọkụ mmekọrịta, ndị ọkachamara sitere na enyemaka enyemaka O2 & NSPCC bụ n'efu iji nyere aka. Kpọọ ha na 0808 800 5002.
Gaa Leta NSPCC na O2 - ichekwa ụmụaka n’ịntanetị
The ndekọ ndekọ sen / ict edozila iji kpokọta ozi na ihe ndi ozo di mkpa. Ndị nkuzi na ndị nne na nna nwere ike depụta weebụsaịtị bara uru yana ihe ntanetị. Ndị ụlọ ọrụ nwere ike ido onwe ha na ngwaahịa ha dị ka ngwanrọ, ngwaike na akụrụngwa, yana ọrụ na ihe omume nwere ike ịmasị gị.
Gaa na SEN ICT Akwụkwọ ndekọ
Worldwa Pụrụ Iche site na Teknụzụ Inclusive bụ Ọrụ Na-adịghị N'ịntanetị iji mee ka ndị na-etinye aka na Mmụta Pụrụ Iche gburugburu ụwa na akụkọ ọhụrụ, mmepe, ihe omume na ozi ọhụụ.
Gaa Leta Specialwa Pụrụ Iche
At Tate Kidsmụaka na-egwu egwuregwu nkà n'efu na egwuregwu ọchị, chọta ihe omume, gụọ banyere ndị na-ese ihe ma kesaa nka gị. Ebe nrụọrụ weebụ kacha mma maka ụmụaka.
Gaa Leta ụmụaka
Izi Ihe nwere ọtụtụ puku echiche nkuzi, mmemme na akụrụngwa nke ị nwere ike iji na klaasị gị ma ọ bụ ọbụlagodi n'ụlọ.
Gaa na Ozizi Nkuzi